Munamato wemufi. ? Chirangaridzo, Kuva Anodiwa Wakanyarara uye Wakanaka
Munamato wemufi. Mariri tinogona kukumbira iwo mweya iyo iri munzira yekuzorora kusingaperi kuitira kuti vawane rugare rwavanoda munguva pfupi iripo.
Chokwadi vazhinji vedu takatambura rufu yemumwe munhu wepedyo, hazvina basa kuti anga ari nhengo yemhuri here kana shamwari, chakakosha ndechekuti haachisiri munyika ino, aenda kuupenyu hwapashure.
Izvo zvinonzi ukasanamatira mushakabvu, tinokangwawo kana tichifanira kufamba nenzira iyoyo.
Vamwe vanhu vanowanzovhenekera makenduru uye vanogadzira atari yakakosha kuti vayeuke mudiwa wavo apo vachisimudza minamato.
Nekudaro, kutenda uku kunowanzotsoropodzwa nevaya vasinganzwisise re uye vane hushoma hwomweya. Vanhu ava havanzwikwe, nenzira iyoyo tinochengeta moyo yedu yakachena.
1 Chii chiri munyengetero wevakafa?
1.1 Munamato kune mudiwa akafa
1.2 Minamato yevakanaka vakafa
1.3 Minamato yevakafa pane yavo yezororo
1.4 Munamato wenhengo dzemhuri dzakafa (Katurike)
2 Minyengetero ichaita mushakabvu zvakanaka here?
Chii chiri munyengetero wevakafa?
Pane kutenda kwekuti, kazhinji, vanhu vanofa havana kugadzirira kutarisana nenyika iyo, ndosaka isu tiri kuda kusimudzira minamato yemunhu akafa kuti awane zororo risingaperi.
Zvinotendwa kuti munzira iyoyo, mushakabvu anogona kuchenesa mweya yavo kuburikidza nepfungwa dzinoyera senge munamato.
Kazhinji itsika kuita mimwe minamato mushure mekunge mufi aviga, zvisinei hazvina kukwana kuti uenderere mberi nekuzviita minamato Kwenguva refu uye kunyange izvi zvinobatsira kuchema uye kurwadziwa nekuparadzaniswa kwemuviri kwemhuri yedu yemhuri kana shamwari.
Izvo zvinoita kuti tinzwe kuti takabatana kunyangwe iri kure.
Mwari, ndimi mega muridzi wehupenyu.
Iwe unotipa chipo chekuzvarwa uine chinangwa uye nenzira imwechete kana tachiizadzisa, iwe unotidana kuumambo hworugare, kana iwe ukafunga kuti shuviro yedu munyika ino yatopedzwa.
Kunyange kumberi kana shure ...
Nhasi ndinoshuva kuoneka pamberi pako nekuzvininipisa kwakanyanya uye zvirokwazvo kukumbira kwangu kuchanzwika.
Nhasi ndoda kukumbira mweya we (zita remushakabvu) uyo wawakadana kuzorora padivi pako.
Ini ndinosimudzira munamato uyu, iwe changamire, nekuti kunyangwe munzvimbo dzematutu dzakaipisisa iwe rugare runyararo. Baba Vokusingaperi, ipa zororo muparadhiso yemweya wako uye nehumambo hwako kune avo vakatosiya ndege iyi yepasi.
Iwe uri Mwari werudo uye nekuregerera, kanganwira kutadza uye zvivi zvemweya zvino zviri parutivi rwako uye umupe hupenyu hwusingaperi.
Zvakare, ndinokukumbira baba, kune vese avo vanga vachichema kubviswa kweumwe munhu asiriye zvakare, svinura moyo wako uvambundire nerudo rwako. Vape huchenjeri, kuti vakwanise kunzwisisa zviri kuitika.
Vape rugare kuti vagadzikane panguva yakaoma. Vapei kurasikirwa kuti vakunde kusuruvara.
Ndatenda changamire, nekunditeerera nhasi nemunamato uyu kuti nekuzvipira ndinosimudzira kwauri, kuti nengoni nerunyararo, upe runyararo kune avo vasina panguva ino.
Tungamira nhanho dzevanhu avo iye zvino vasarudzwe uye uvaite kuti vafarire mufaro wehupenyu.
Ndatenda baba, ameni.
Wakafarira munyengetero wevakafa here?
Mushure mekufa, kune avo vanovimbiswa, kuti imwe imwe nguva yekucheneswa inogona kurarama, kuti kwete zvese zvakarasika asi kuti tine mumwe mukana.
Mune izwi raMwari tinoona mamwe mareferenzi ekuti tiregererwe munyika ino kana mairi mairi mairi; Jesu Kristu pachake anozvitaura mune yake imwe yemisangano inoshamisa.
Ichokwadi icho chatisingakwanisi kubva kwaari, kunze kwekunge isu tadyara uye mangwana mumwe munhu anozotiitirawo saizvozvo.
Ah Jesu, iyo chete nyaradzo mumaawa asingaperi ekurwadziwa, iyo chete nyaradzo mukusagadzikana kukuru uko kufa kunokonzeresa pakati pevadiwa!
Imi, Ishe, makavona matenga nenyika, nevanhu, nevanochema pamazuva okusuwa;
Iwe, Ishe, makachema pamusoro peshungu dzerudo nyowani paguva reshamwari inodiwa;
Iwe, o Jesu! kuti iwe wakanzwira tsitsi kuchema kweimba yakaputsika, nemoyo yakagomera mukati isina kunyaradza;
Imi, Baba vane rudo, uye tinonzwira tsitsi misodzi yedu.
Tarisa uone ivo, Ishe, iro ropa remweya unorwadza, kurasikirwa neiye waaida kwazvo, shamwari yakatendeka, muKristu anoshingairira.
Vatarise, ivo, Ishe, sechipo chatinopa mweya wako, kuti urichenese muropa rako rinokosha uye utorere nekukurumidza kudenga, kana usati uchinakidzwa naro mariri!
Tarisa navo, Ishe, kuti iwe utipe isu simba, moyo murefu, zvinoenderana neuMwari hwako muyedzo uyu unotambudza unotambudza mweya!
Tarisa uone, ooh inotapira, oh vanotya Jesu! uye kwavari tipeiwo kuti avo pano pasi vagara vakasungwa nezvisungo zvechidakadaka zverudo, uye zvino isu tinochema kusavapo kwechinguvana kwemudiwa, tinosangana zvakare pamwe nemwi kuDenga, kuti tigare takabatana nekusingaperi paMwoyo wako.
Pasina mubvunzo, yakanaka munamato kune vadiwa vakafa.
Minamato yakanaka kwazvo yemushakabvu ndeiya yakagadzirwa kubva pamoyo uye mairi tinogona kuburitsa zvese zvatinochengeta mumoyo.
Tinobvunza zororo rake risingaperi, for Ndiwane rugare zvaunoda
Nekudaro isu tinokumbirawo kuti utiudze isu nesimba uye tinokwanisa kukunda nguva yakaoma yatingave tiri kupfuura.
Kune mimwe minamato inogona kushanda segwara, kunyanya mune idzo nguva dzisingabude mazwi nekuda kwekurwadziwa nekusuwa.
Minamato yevakafa pane yavo yezororo
Ah zvakanaka Jesu, uyo muhupenyu hwako hwese akasuwa tsitsi dzevamwe, tarisa netsitsi pane mweya yevadiwa vedu vari muPurigatori.
O Jesu, uyo akada wako nekufungidzira kukuru, inzwa kukumbira kwatinoita kwauri, uye netsitsi dzako upe kune avo vawakatora kubva kumba kwedu kuti vafare nekusingaperi muchipfuva chako infinito Amor.
Vapei, Ishe, zororo risingaperi uye mwenje wavo usingaperi uchavhenekera.
Dai mweya yevakatendeka yaenda nengoni dzaMwari dzorora murugare.
Kana iwe uchida kunamatira kune nhengo yemhuri, uyu ndiwo munyengetero chaiwo wevakafa.
Kurangarira nhengo yemhuri kana shamwari yakafa pazuva rakakosha ndeye, kazhinji, haigoni.
Izvi zvinodaro nekuti vanga vari nguva dzekupemberera uye vasiri munhu iyeye anonzwa kushushikana, zvisinei hazvo kune minyengetero kana minyengetero yakakosha yekuita pamisi iyoyo.
Zvinogona kuve zuva rekuzvarwa, muchato kana zvimwe rimwe zuva rinokosha.
Chinhu chakakosha nezve zvese izvi kusazvikanganwa uye kubvunza chero kwaunenge uri rugare ngaruve nerunyararo uye izvozvo ramba uchisimbisa izvo zvasara padenga repasi.
Dzimwe nguva itsika kusangana nedzimwe nhengo dzemhuri uye nekukwidza minamato mumba, yeuka kuti izwi raMwari rinoti kana vaviri kana vatatu vakasarudzika kukumbira chimwe chinhu pachinzvimbo chaJesu, ivo Baba vari kudenga vanopa chikumbiro chakaitwa.
Munamato wenhengo dzemhuri dzakafa (Katurike)
Mwari, imi munopa kuregererwa kwezvitadzo uye munoda ruponeso rwevanhu, tinokumbira tsitsi dzenyu muchifarira hama dzese nehama nehama dzakasiya nyika ino.
Vape muumambo hwako hupenyu hwusingaperi.
Uyu munyengetero wevakafa vapfupi, asi wakanaka kwazvo!
Kunamatira mufi ndiyo imwe yetsika dzekare dzakatenderedzwa nekereke yechiKristu nyikaYakave dzidziso yekutenda kuti mushakabvu vari munzvimbo iyo yavari kunatswa kuitira kuti vapinde muumambo hwedenga.
Ino inzvimbo yokuzorora yakagadzirirwa ivo naMwari kunyanya, izvi zvinoratidza rudo rusingaperi urwo Ishe raanarwo kuvanhu.
Wana pamwe semhuri Kunamatira mumwe wemhuri yemushakabvu kana kukumbira Misa kwatinokwanisa kuita minamato yakakosha uye minamato pamwechete neshamwari nedzimwe nhengo dzemhuri itsika.
Izvi zvinoshandawo sekunyaradza, sechiratidzo chekuti hatina kukanganwa mhuri yedu uye kuti tichasangana zvakare pamwechete.
Minyengetero ichaita mushakabvu zvakanaka here?
Chinangwa chemunamato kunevakafa ndechekuti. Kumbira rubatsiro, rubatsiro, dziviriro uye mufaro kune iye munhu asisiri pakati pedu.
Izvo zvichaita chete zvakanaka. Kana iwe uchinamata uine rutendo uye nerudo rukuru zvinounza zvinhu zvakawanda zvakanaka, zvese kune uyo wakafa uye iwe.